Ngena/Bhalisa | PosterMyWall
Klama Amaphosta Amangalisayo nemifanekiso Yomthombo Wezokuxhumana!
Ukhetho olukhulu lwamathempulethi
Kuyashesha futhi kulula
Okudanilodwayo kwezinga eliphakeme lokubukeka
Yenza Amavidiyo Nemikhangiso Ekhangayo Ngemizuzu
Izinkulungwane zesitoko samavidiyo
Otuselwa Kona Okusha
Amapheshana Ebhizinisi Amancane
Konke Kwedijithali & Nemikhiqizo Yokunyatheliswayo
Thengisa Imiklamo yakho
Noma ngena usebenzisa ikheli le-imeyili yakho
Faka igama lephrojekthi yekilasi
Bhalisa ngekheli le-imeyili yakho
Ingabe uneminyaka engu-13 noma ngaphezulu? Yebo Cha
Ngaziseni ngokukhushulwayo kanye nezivuseleli
Ngokuchofoza inkinobho engenhla uvumelana nesithi Isivumelwano Somsebenzisi we-PosterMyWall (evezwe ngenhla).
Sikhona ukuze sikusize. Vakashela Isikhungo Sosizo.
Amathempulethi Adumile ku-PosterMyWall
© 2019 250 Mils LLC. Wonke Amalungelo Agodliwe.
Uyasivumela yini ukuba sifake amakhukhi esipheqululini sakho ukuze sihlele lokho okutholayo ngokwezifiso zakho?
Sivumele sithuthukise isayithi ngokuqoqa ukusetshenziswa kwedatha okungaziwa kusayithi.
Sivumele siveze imikhangiso ka-PosterMyWall kwezinye izingosi.
Sivumele siveze imiklamo efanele kwabavakashela isayithi.